TrackR Bravo, aza hadino ny very ny fanananao manokana | Androidsis
Samy nanadino ny poketra na ny lakilenintsika rehetra isika rehefa nivoaka teny amin'ny arabe. Na ny ratsy indrindra: tsy mahita azy ireo rehefa maika ianao. Io no idirany TrackR Bravo, fitaovana marani-tsaina izay ampiasaina hahitana zavatra haingana sy haingana: zavatra bisikileta, poketra, fanalahidy, biby fiompy, kitapo ...
Ho ahy manokana, manana fanomezana noho ny fanadinoana zavatra aho, ka rehefa nahazo ity gadget mahaliana ity aho dia fantatro fa izaho no olona mety hanao fair. famakafakana ny TrackR Bravo. Izany no nampiasako azy nandritra ny iray volana ary ny fahatsapako tena tsara.
1 Volavola tsotra sy ahazoana aina
2 Mampifandray ny TrackR Bravo amin'ny telefaona
3 TrackR Bravo, manandrana azy eny amin'ny arabe
4 Famaranana taorian'ny fitsapana ny TrackR Bravo
Volavola tsotra sy ahazoana aina
Ny fitaovana manana ireo toetra ireo dia tokony ho kely ary manaraka ny fanamarihana amin'ity fizarana ity ny TrackR Bravo. Ary izany ve ny fitaovana kely dia manana savaivony 3.1 cm fotsiny ankoatry ny hatevin'ny 0.4 cm. Miaraka amin'ny refy kely toy izany dia mety kokoa ny mampiasa azy amin'ny lakilen'ny biby, kitapom-bolanao na vozon'akanjonao mba hanomezana ohatra vitsivitsy momba ny fahafaha-manaon'ny gadget ity.
El Touch of the TrackR Bravo dia mahafinaritra be, amin'ny ampahany, noho ny vatany rakotra alim-by anodized, izay miaro ihany koa ny toerana misy azy amin'ny fiarovana azy amin'ny vodilanitra sy ny lavo.
Eo anoloana no ahitantsika ny logo an'ny orinasa, ary koa a bokotra izay manome mihoatra noho ny fanerena marina rehefa tsindriana. Asongadino ny rafitra mahira-tsaina hialana amin'ny bateria ny batterie, miaraka amin'iny farango kely miafina ao amin'ny vatan'ny mpamantatra Bluetooth iny.
Mampifandray ny TrackR Bravo amin'ny telefaona
Raha te-hampifanaraka ny TrackR Bravo amin'ny findaiko aho dia tsy maintsy nampidina ilay rindranasan'ny fitaovana tamin'ny findaiko ary nanaraka dingana tsotra roa: velomy ny bluetooth ary tsindrio ny bokotra eo amin'ilay toerana hitadiavana azy ireo. Tao anatin'ny iray minitra latsaka dia vonona daholo ny zava-drehetra. Ataovy ao an-tsaina izany TrackR Bravo dia manana Bluetooth 4.0 ary mitaky Android 4.0 na avo kokoa hiasa.
Ny mekanisma Bravo dia tena tsotra: manana ny fifandraisana Bluetooth 4.0 fanjifana ambany tsy tapaka, jiro LED mifangaro ary mpandahateny micro roa izay miteraka maneno hatramin'ny 85 dB. Miaraka amin'ireo endri-javatra ireo, ny batterie karazana CR1616 dia mihoatra noho ny ampy hahafahan'ny gadget manana fiainana mahasoa mandritra ny 1 taona, ary avy amin'ny fampiharana finday TrackR Bravo dia azonao atao ny mahita ny fahaleovan-tena sisa tavela amin'ny bateria.
Miresaka momba ny Rindrambaiko finday TrackR Bravo ho an'ny Android, lazao fa tsotra sy intuitive io. Na dia tsy manana GPS anatiny aza ity gadget ity dia hangataka fahazoan-dàlana hampihetsika ny GPS ilay rindranasa. Ny antony? Raha sendra mametraka toerana diso ianao dia manoratra avy hatrany ny toerana misy azy amin'ny alàlan'ny Google Maps ny fampiharana mba hahafantaranao ny toerana nahavery anao ilay zavatra.
Amin'izany fomba izany, Ny sisa hataonao dia ny mamantatra ny làlana mankamin'ny fandrindrana mety nahalasa ilay zavatra tamin'ilay mpikaroka TrackR. Azonao atao ihany koa ny misoratra anarana sy mampiasa ny fiasa Crowd GPS. Miaraka amin'ity serivisy ity, raha misy mpampiasa ny app TrackR mandalo eo akaikin'ilay zavatra very, dia handray fampandrenesana manondro ny toerana GPS isika. Mazava ho azy fa mila vondrom-piarahamonina mpampiasa goavambe ho tena mahasoa ity endri-javatra ity, saingy indraindray.
Amin'ny alàlan'ny fampiharana dia ho hitantsika izany afaka mampiasa mpikaroka TrackR Bravo hatramin'ny 10 isika amin'ny fotoana iray izay dia ho tantanana amin'ny alàlan'ny fampiharana finday Android iray ihany. Azontsika atao ihany koa ny manamboatra azy io mba hahafahan'ny telefaona mamoaka feon-kira isaky ny miala amin'ny toerana misy azy. Fomba iray hisorohana an'izany, ohatra, adinonao ny lakile ao an-trano.
Ahoana raha toa ka lehibe ny tranonao na ny biraonao mba hiparitahan'ilay mpikaroka? Aza manahy fa tsy mila mamono fanairana isaky ny telo ianao manomboka izao afaka mamorona faritra Wi-Fi ianao izay hampanginana ireo fampandrenesana raha mbola mifandray amin'ireo tambajotram-pifandraisana ireo ny finday.
Ny antsipiriany iray tena tiako dia ny hoe, raha ny very ny findainao, ny fanindriana ny bokotra TrackR Bravo dia hampihetsika ny bip amin'ny telefaona miaraka amina hatraiza hatraiza ny herin'ny mpandahateny tafiditra ao amin'ny findainao finday avo lenta.
TrackR Bravo, manandrana azy eny amin'ny arabe
Ok, hitako mora foana ny lakile sy ny kitapom-batsy ato an-tranoko, saingy somary mora ny mahita azy ireo ao an-trano miaraka amin'ny fanairana alefan'ilay fitaovana, fa ahoana kosa ny any ivelany? Ho an'ity mpiara-miasa ity Nanafina ny lakileniko tamina fotoana iray tao amin'ny valan-javaboary iray izy, nalefany tamiko ny toerana ary nikasa hitady azy ireo tamin'ny fampiasana ilay application aho.
Tsy fantatro hoe aiza no nanafenany ny lakilen'ny mpitsikilo, na dia manana toerana eo ho eo aza izy io. Rehefa avy naka fihodinana vitsivitsy nanodidina ilay faritra nahazo ilay telefaona hifandray amin'i TrackR Bravo, midika izany fa akaiky ny lakileko malalako.
Nampihetsika ny feo aho ary nifantoka tamin'ny fahitana an'ity bip mampiavaka ity. Tsy misy. Ny tabataba manodidina dia nanarona tanteraka ny fanairan'ny mpanara-maso. Ary farany, rehefa avy nitsemboka kely aho dia nahita ny toerana misy azy miaraka amin'ny lakilako, na dia tsy noho ny fanairana nahenoana azy io fa ny rafitra natolotry ny fampiharana mba hahitanao ny haavon'ny akaiky ny zavatra tokony harahina (akaiky , akaiky, lavitra na mijery).
Tsy manana refy decibel aho fa manana zavatra iray mazava tsara: Ny TrackR Bravo dia tsy manana 85 dB na dia amin'ny nofy aza. Nosintomiko ny refy desibel avy amin'ny magazay fampiharana Google ary, rehefa dinihina fa ireo karazana fampiharana ireo dia hanana feo ambany kokoa noho ny metatra matihanina, dia norefesiko tao an-trano tamin'ny alina (ka saika tanteraka ny fahanginana).
Rehefa avy nampihetsika ny bip TrackR Bravo dia nanamarika farafahakeliny 50 dB ny fampiharana. Na firy na ohatrinona ny elanelan'ny rindrambaiko, azoko atao ny manamarina fa ny TrackR Bravo dia tsy manana ny feon'ny feo tsara indrindra, na dia Mbola hitako ho gadget mahaliana tokoa io.
Famaranana taorian'ny fitsapana ny TrackR Bravo
Marina fa raha very zavatra eny an'arabe ianao dia ho sarotra ny mahita azy amin'ny alàlan'ny fanairana alefan'ny locator, indrindra raha ampirimintsika ao anaty kitapom-batsy izany. Fa efa nolazaiko anao izany ny fanananao mifehy ny zavatra rehetra ao an-trano dia fitaovana tena ilaina.
Mihoatra ny indray mandeha Nampiasa TrackR Bravo aho mba hitadiavako ny poketrako ao an-trano ary, mandray an-tanana izany izao20.95 euro ihany no ahitanao azy any Amazon, Heveriko fa fitaovana tena ilaina tokoa ho an'ireo olona toa ahy, tena tsy mahay mandanjalanja.
Fitaovana kely sy mora ampiasaina izy io
TrackR Bravo dia tena tsotra sy intuitive ampiasaina
Somary ambany ny feo mahita ny mpikaroka amin'ny toerana mitabataba
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » TrackR Bravo, aza hadino ny very ny entanao manokana
TechiPic dia hoy izy:
tia ny lahatsoratra
Mamaly an'i TechiPic
Salama, raha ny amin'ny trackr, amin'ny dokambarotra dia asehon'izy ireo ny fomba fanarahan-dry zareo bisikileta amin'ny GPS-n'ny sela, izay ahitan'izy ireo ilay bisikileta heverina fa nangalarina !!!
Tsy hitako izany mety hitranga amin'ny rafitra, raha misy olona afaka mampahafantatra ahy dia tena feno fankasitrahana aho.
Misaotra betsaka anao Gabriel La Plata Bs AS
Jorge A Ibañez J dia hoy izy:
Mamitaka ny dokam-barotra, fohy dia fohy ny elanelam-pitaovana, tsy hitany akory ny zavatra ao an-trano, navelako ny lakilen'ny efitranoko ary nifindra 6 metatra aho ary 5 minitra mahery vao nanandrana nifandray. Diso fanantenana tanteraka. Tsy mamporisika azy io aho, afaka mahita ireo hevitra izay ratsy indrindra amin'ny fampiharana ofisialy ianao.
Valiny tamin'i Jorge A Ibañez J